နားကြပ် - YouTube နှင့် Reddit မှဂီတဖွင့်စက် | Linux မှ
၏လမ်းကြောင်းသစ် streaming ကို format နဲ့အကြောင်းအရာ၏စားသုံးမှု နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၎င်းသည်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှယခုတွင်အထီးကျန်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရဝေးကွာခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ Covid-19 ကပ်ရောဂါပို။ ပင်။
ပြီးတော့အွန်လိုင်းတေးဂီတကိုစားတဲ့နယ်ပယ်မှာ၊ YouTube ကိုတစ် ဦး စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် အမည်ခံန့်အသတ်ဂီတစာကြည့်တိုက်။ ဒါကြောင့် application များ (player များ) ကို online သို့မဟုတ် desktop များမှာစားသုံးရန်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည် ဂီတအကြောင်းအရာ အွန်လိုင်းကဲ့သို့ «နားကြပ်».
အားဖြင့်ဂီတလယ်ပြင်၌ YouTube မှတစ်ဆင့်လွှင့်ထုတ်သည် အထူးသဖြင့်, «နားကြပ်» အလင်း၊ ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်ထင်ရှားသည် streaming များမှတဆင့်ဂီတဖွင့်စက်၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းများ၊ နားထောင်ခြင်းတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ၏ကြော်ငြာပြတ်တောက်ခြင်းများကိုကျော်ဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
သို့ရေငုပ်မီ «နားကြပ်» အခြားအချိန်အခါများ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအကြောင်းများကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတိပြုသင့်သည် အလားတူဂီတဖွင့်စက်streaming များမှတဆင့်အွန်လိုင်းရှိသည့်အကြောင်းအရာအရင်းအမြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာ "နျူကလီးယား"အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြပေးတယ် -
"Nuclear သည် GitHub တွင် "Affero GPL" လိုင်စင်နှင့် "GNU / Linux First" ဟုခေါ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်အရတီထွင်ထားသော streaming ဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှုကိုလေးစားသည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ငါတို့ကဒါကိုပြုပြင်ပြီးစီမံကိန်းကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ တရား ၀ င် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်သော့ချက်စကားလုံးက Nuclear သည်ခေတ်မီဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဖောင့်များကိုလွှင့်ထုတ်သည်။" Nuclear - ကောင်းမွန်တဲ့ streaming ဂီတဖွင့်စက်
1 နားကြပ် - Linux အတွက် Desktop Player
1.3 Download, Installation နှင့် Screenshots
နားကြပ် - Linux အတွက် Desktop Player
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည် - \_ t
"နားကြပ်သည် YouTube နှင့် Reddit တို့အသုံးပြုသော desktop music player ဖြစ်သည်။"
သို့သော်၎င်း၏၌တည်၏ GitHub အပေါ်က်ဘ်ဆိုက် အောက်ပါအတိုင်းပိုမိုအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြပါ -
"နားကြပ်သည် Mac, Windows နှင့် Linux တို့အတွက်ရိုးရှင်းသောဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်ပြီး YouTube တွင်ရှာဖွေမှု၊ အမျိုးအစားများနှင့်ခေတ်များနှင့်ကျော်ကြားသော home screen နှင့် Reddit မှရေဒီယိုတစ်ခုပါရှိသည်။ နားကြပ်သည်ဂီတခွဲခွဲပေါင်း (၈၀) ကျော်မျှဝေထားသောသီချင်းများကိုယူပြီး၎င်းတို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးအလိုအလျောက်ဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်ကဲ့သို့သောအခြားလူသားများရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်းဂီတအသစ်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။"
ဒါဟာ multiplatform ဖြစ်ပါတယ်ဖြေ - ၎င်းကို Windows၊ Linux (Debian, Redhat) နဲ့ MacOs တို့မှာရရှိနိုင်တယ်။ ၎င်းကိုပင်ရင်းအကွက်မှထုံးစံအတိုင်းတည်ဆောက်နိုင်သည်။
2 Visual themes များရရှိနိုင်။ သူ၌အမြင်အာရုံခေါင်းစဉ် ၂ ခုရှိသည်။ အမှောင်ထုနှင့်အလင်း။ မကြာမီ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်မှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Last.fm နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြေ - လူကြိုက်များတဲ့လူမှုရေးဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ရရှိနိုင်သည့်သီချင်းများကို scroll လုပ်၍ အချက်အလက်များကိုတည်းဖြတ်ရန်ရွေးချယ်ပါ။
သီးသန့်နှင့်လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုများဖြေ - အချက်အလက်အားလုံးကို၊ ကွန်ယက်ပေါ်မှာမမြင်နိုင်အောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့၊ ဒေတာ၊ အထောက်အထားတွေနဲ့ကွတ်ကီးအားလုံးကိုလုံခြုံတဲ့ SSL ဆက်သွယ်မှုတခုကနေတဆင့်ကူးယူသွားမယ်။
တိမ်တိုက်ထပ်တူပြုခြင်းဖြေ - စီမံခန့်ခွဲမှုအားလုံးကမိုးတိမ်ထဲရောက်နေတယ်။ လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုသူ၏ YouTube သုံးစွဲသူအကောင့်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာရမည် လုပ်ငန်းစဉ်.
Download, Installation နှင့် Screenshots
၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် အရေအတွက်အား 3.3.0 ဒေါင်းလုပ်ချပြီးနောက်၊ format ".deb"နှင့်တပ်ဆင် "Apt" or "dpkg", «နားကြပ်» ဒီဟာနဲ့တူသည်:
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအရမ်းချစ်သောကြောင့်, ကြော်ငြာအားလပ်ချိန်များကိုနားမထောင်ပါနှင့်ဂီတသာမကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှပါ YouTube ကို, ဥပမာ, အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux ရှိချန်နယ်များ ငါမကြာခဏတွေ့မြင်သော ပြီးတော့အားလုံး ဝင်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ တစ်စုံတစ် ဦး ကအသုံးပြုလိုပါကသာလိုအပ်သောလျှောက်လွှာတွင် setup menu ကို နှင့်ရွေးချယ်စရာများ ဆက်သွယ်မှုများ y အကြိုက်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Headset»သေးငယ်ပြီးအသုံးဝင်သည် ဂီတဖွင့်စက် အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာ YouTube နှင့် Redditopen source နှင့် multiplatform သည်များစွာသောအားဖြင့်ကြော်ငြာပြတ်တောက်ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » နားကြပ် - YouTube နှင့် Reddit မှဂီတဖွင့်နိုင်သည်
အားနည်းချက် ၁၇ ခုနှင့် backdoors များကို FiberHome ကိရိယာများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်